CentOS 6.4 misy .. + Ahoana ny fandaminana azy :) | Avy amin'ny Linux
CentOS 6.4 misy .. + Ahoana ny fandaminana azy :)
petercheco | | Fitsinjarana, GNU / Linux, Tutorials / Manuals / Tips
Tamin'ny 9 martsa 2013 dia navoaka ny kinova vaovao an'ny CentOS 6.4. Ity ambany ity ny fanambarana ofisialy miampy tutorial momba ny fomba hikirakira ny CentOS 6.4 amin'ny birao na ny rindranasa findainao.
Ny fisintomana mivantana an'i Espana dia misy eo noho eo:
Ny firenena hafa dia afaka misintona azy avy amin'ny:
Afaka andro vitsivitsy dia hiseho ilay kinova livecd an'ny CentOS 6.4.
Avelako ho anao ny sarin'ny rafiko (lohahevitra Equinox sy sary masina Faenza):
Fanambarana ofisialin'ny CentOS 6.4 amin'ny teny anglisy 🙂:
"Tamin'ny 9 martsa lasa teo dia nanambara i Karanbir Singh fa misy eo noho eo ny fampidinana ny CentOS 6.4, na ho an'ny maritrano 32-bit na 64-bit."
CentOS 6.4 dia fizarana Linux an-tsokosoko ao amin'ny Enterprise izay azo avy amin'ny loharano natolotry ny Upstream OS Provider ho an'ny Red Hat. Io ny fanavaozana eo amin'ny sampana 6.x an'ny andiany ary miaraka amina fanamboarana bibikely, fanavaozana ary fiasa vaovao.
Ireo mpampiasa dia afaka manavao ny CentOS 6.3 na amin'ny famoahana hafa ao amin'ny sampana 6.x. Tsotra ny fizotrany ary ny hany takiny dia ny mihazakazaka ny baiko "fanavaozana ny yum".
Ny fihazakazahana ny "fanavaozana ny lisitra yum" alohan'ny hanaovana ny fanavaozana dia soso-kevitra, amin'izay ny mpampiasa dia afaka mahazo ny lisitry ny fonosana izay havaozina. Raha hijerena raha tena eo amin'ny CentOS-6.3 ianao dia mihazakazaha: "rpm -q centos-release" ary tokony hiverina izany: "centos-release-6-3.el5.centos.1."
CentOS-6.4 dia mifototra amin'ny famoahana ambony EL 6.4 ary misy fonosana avy amin'ny karazany rehetra. Natambatra ho iray ny tahiry ambony rehetra, mba hanamorana ny fiasan'ny mpampiasa farany.
Hevitra misongadina ao amin'ny CentOS 6.4:
• Nampidirina ny mpamily Microsoft Hyper-V hamela ny CentOS hahomby kokoa amin'ny maha Machine Virtual azy rehefa apetraka amin'ny mpizara Microsoft Hyper-V;
• Ny tranomboky samba4 (nomen'ny fonosana samba4-libs) dia novaina ho an'ny tsimbadika farany ambony hanatsarana ny fiaraha-miasa amin'ireo domba Active Directory (AD). Raha manavao ny CentOS-6.3 ka hatramin'ny CentOS-6.4 ianao ary mampiasa Samba dia alao antoka fa esory ny fonosana samba4 hialana amin'ny fifanolanana mandritra ny fanavaozana. samba4 dia mbola - farafaharatsiny mba ampahany - heverina ho topi-maso amin'ny haitao;
• Araka ny nambara tao amin'ny CentOS-6.3 Release Notes, dia tsy manana intsony i matahari ankehitriny. CentOS-6.4 dia nandefa fanavaozana farany izay tokony hanala ireo sisa tavela amin'ny masoandro. Mba hiantohana fa voafafa ny taolam-paty rehetra, esory ny sun * rehefa avy manavao ny 6.4;
• dev86, iasl, ary qemu-vahiny-agents dia nampiana tamin'ny maritrano i386.
Avoahy ny naoty sy ny vaovao feno:
Marihina fa ny olona rehetra manana CentOS napetraka ao amin'ny version 6.x dia hanavao ny rafitra misy azy ireo :). Ireo mpampiasa CentOS ambany noho ny andiany 6 dia tsy manana fomba hanatsarana izany.
Ankehitriny dia hamboarintsika ny CentOS 6.4 ho an'ny mpampiasa rehetra, toa ahy, mampiasa ity rafitra ity amin'ny birao misy azy na amin'ny solosainy.
Manampy ireo tahiry fanampiny izahay:
Handeha isika Rafitra »Fitantanan-draharaha» Ampio, esory ny rindrambaiko ary raha vantany vao misokatra ny programa dia hosokafantsika Rafitra »Repositories.
Ao no hizaha ireo boaty Base, Contrib, Extras, Plus, fanavaozana CentOS-6 ihany. Avelantsika tsy misy marika sy akaiky ny sisa.
Avy eo manokatra ny terminal izahay ary miditra ho faka sy fanavaozana:
Ankehitriny dia hametraka java isika:
Mametraka Java izahay amin'ny alàlan'ny fanokafana ny programa rindrambaiko manampy / manala ary mitady openjdk. Manamarika ny fametrahana ireo fonosana OpenJDK Runtime Environment (ireo roa misy 1.6 sy 1.7) izahay ary manisy marika ny fonosana icedtea.
Mampihatra ireo fanovana izahay.
Handeha hametraka flash isika izao:
Ho an'ny flash dia mankany amin'ny pejy flash adobe isika ary misafidy ny kinova YUM ho an'ny Linux. Manohy ny fisokafana izahay ary hapetraka ho azy.
Vantany vao ampiana ny tahiry, dia hanampy / hanala programa izahay, hikaroka tselatra ary hanisy marika ny flash adobe.
Ankehitriny dia manampy ny tahiry RPMforge izahay:
Ankehitriny dia manampy ireto tahiry RPMFusion ireto izahay:
Ankehitriny dia manampy ny tahiry Epel izahay:
Misintona ireo fonosana mifandraika amin'ny maritrano izahay ary mametraka azy ireo amin'ny tsindry roa.
Ankehitriny isika dia hametraka mpamily laharam-pahamehana avy amin'ny tahiry hiantohana ny fitoniana ao amin'ny rafitrao. Ho an'ity tanjona ity dia misy ny fonosana yum-plugin-laharam-pahamehana (apetrak'izy ireo avy ao amin'ny foibe manampy / manala programa).
Raha vao apetraka dia tsy maintsy manova ny .repo an'ny /etc/yum.repos.d/ sy manamboatra ny laharam-pahamehana, izay laharam-pahamehana amin'ny 1 ka hatramin'ny 99
laharam-pahamehana = N
Ny fanaingoana aroso dia:
base, addons, update, extra… priorité = 1
centosplus, contrib ary adobe… laharam-pahamehana = 2
OtherRepos toy ny rpmforge, rpmfusion ary epel… laharam-pahamehana = 10
Raha te hahavita an'ity fanovana ity dia tsy maintsy manana alalana faka ka manokatra terminal isika ary manoratra:
Misokatra ho anao i Nautilus ary afaka mandeha amin'io lalana io ianao ary manova ny tsiro 🙂
Avelako sary ianao mba hahatakarana azy bebe kokoa.
Ankehitriny isika dia afaka manavao ny rafitra amin'ny alàlan'ny fanokafana ny terminal indray ary amin'ny fanoratana:
Ankehitriny isika dia afaka mametraka ny rindranasa misy tsy misy olana amin'ny fitazonana ny rafitrantsika tsy hivadika.
Fampiharana tsy azonao adino (apetrakao amin'ny alàlan'ny fanampiana / fanesorana programa):
File-roller, Libreoffice, p7zip, rar, unrar, vlc, Brasero, Gimp, gcalc, gconf-editor, gnome-utils, gnome-system-monitor, gtk-recordmydesktop, filezilla, alacarte, kaopy ary system-config-printer
Miaraka amin'izany izahay dia manana ny rafitray hampiasaina na amin'ny solosaina birao na amin'ny solosaina finday fa tsy amin'ny mpizara fotsiny araka ny eritreritry ny maro.
Ho an'ireo maniry ny hanao skype dia azony atao ny misintona izany amin'ity rohy ity:
Mijanona fotsiny amin'ny fametrahana amin'ny tsindry roa sosona.
Ary efa ananan'izy ireo izany namana avy amin'ny blog.desdekinux.net 🙂
Miarahaba, ankafizo ity kinova ity ary aza adino ny maneho hevitra 🙂
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » CentOS 6.4 misy .. + Ahoana ny fandaminana azy :)
Ivan Barra dia hoy izy:
CentOS, ny rafitra fiasa tsara indrindra ho an'ny mpizara, miala tsiny SuSE, fa ny fanohananao dia voaloa ary ho an'ny Debian Taliban, naleoko hatrany ireo distros miorina amin'ny RPM, koa aza tsaraina aho.
Nihaona taminao aho tamin'ny 2007, hatramin'ny andianao faha-5 ary namako foana ianao tamin'ny tetik'asa tsy tambo isaina, ho an'ny mpizara tambajotra, mailaka anatiny, tranonkala, ary farany dia nanampy ahy tamin'ny Nagios ianao hahazo vola nandritra izay roa taona lasa izay. Nanana olana vitsivitsy tamin'ny wifi vitsivitsy izahay (broadcom ho an'ny fanovana), saingy nivoaka mialoha foana izahay. Nanampy ireo orinasa hipoitra izahay, raha jerena ny tahiry lehibe amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana amin'ny rindrambaiko sy ny fananana.
Ny rehetra nijery anao tao ambany kokoa mba ho afaka, fa avia, ny sarany amin'ny fanohanana dia ampangaina mafy foana mba tsy ho tsaraina ianao.
CentOS, misaotra anao misy.
Na dia mbola mijanona miaraka amin'ny 5.8 aza aho amin'ny mpizara sasany, tsy misy maika ny hanavao (miampy ny tsy fitiavako ny fanaraha-maso).
Miarahaba anao ary vaovao tsara.
Valiny tamin'i Iván Barra
RAW-Basic dia hoy izy:
OT: Hahaha .. ..ny taratasy ho an'ny CentOS .. Tiako .. xD
Vaovao tsara .. .. Mbola tsy nanokana fotoana hanandramako azy aho .. tsy ho ela dia ho ..
Valiny amin'ny RAW-Basic
Tongasoa ianao 🙂
Tena tany am-boalohany sy classy hamaritana ny hatsaran-toetran'ny CentOS.
Valio Andriamatoa Linux
CentOS dia distro lehibe, na dia mampiasa Arch aza aho ho an'ny mpizara dia lehilahy atahorana aho
Izzy dia hoy izy:
Tsara ny hevitra.
Mamaly an'i izzy
Jorda acosta dia hoy izy:
Fanamarihana tena tsara, tsara. 🙂
Valiny tamin'i Jorda Acosta
Lahatsoratra tena tsara, CentOS dia fizarana tena tsara ho an'ny mpizara. Ho an'ny mpampiasa birao manana versionitis kely toa ahy dia azo antoka fa tsy ilay safidy tsara indrindra izy io, saingy tsy azoko atao ny tsy mahafantatra ny vokany. Ho an'ilay tsy mampaninona anao ny manana ny farany sy maniry distro milamina toy ny vy dia mila manandrana CentOS ianao.
Marina marina .. CentOS dia milamina kokoa noho i Debian (izay efa mikendry avo dia avo). Raha ny momba ny lozisialy CentOS, dia mifidy ny kinova azo antoka indrindra amin'ireo programa izy ireo ary ampian'izy ireo ny fiasan'ny kinova ambonimbony kokoa amin'ny endrika fanavaozana. Raha lazaiko aminao ny marina, ity distro ity dia nanasitrana ahy tamin'ny versiontitis ary nahafaly ahy miaraka amin'ireo asany, fahamarinan-toerana, lozisialy ao amin'ireo repo voalaza ao amin'ny lesona izay ahitako izay rehetra ananako tao amin'ny Debian sy tohanako nandritra ny 10 taona .. Inona koa no angatahan'ny mpampiasa iray? 🙂
Masiaka. Raha tsy mijaly amin'ny versionitis ny olona iray, ny iray dia manana ny herin'ny RedHat ao amin'ny ekipa, ary avy eo miandry ny iray hivoaka aorian'ny famoahana ny RedHat 7, izay ho avy, raha avelan'Andriamanitra sy ny mpamorona, miaraka amin'izay rehetra mandeha izy tsara ao amin'ny Fedora 18.
Misaotra .. Androany aho dia efa afaka nilaza fa majia tsy mampino RHEL / CentOS ary fijery izay tiako kokoa .deb distros. RHEL 7 ary noho izany dia hahagaga ny CentOS 7 .. Entin'izy ireo amin'ny antsipiriany kely indrindra 🙂
sn0wt4il dia hoy izy:
Mbola aleoko ihany ny 6.3
Avy eo aho manandrana sy mahazo fankaherezana amin'ity andiany ity ...
Misaotra tamin'ny fanambarana!
Valiny amin'ny sn0wt4il
Tongasoa ianao :) .. Tena tsara 🙂
Iray amin'ireo distros lehibe izay mbola tsy nandramako, angamba satria mifantoka amin'ny mpizara izany ary manana ny hevitro (alohan'ity lahatsoratra ity) fa sarotra ny manamboatra azy. Fa liana te hametraka azy amin'ny solosainako aho.
Eny, mba hanandramana dia voalaza :). Tsotra tokoa ny fikirakirana an'ity distro ity ary mitovy amin'ny an'ny Debian ihany ny tanjany amin'ny ankapobeny. Toy ny any Debian, mila mihetsika ihany koa ireo repo contrib sy tsy maimaimpoana ianao mba hahazoana ny rindrambaiko rehetra avy amin'ny toeranao :). Amin'ny tranga CentOS, ireto repo ireto dia RPMFusion, RPMForge ary Epel. Miaraka amin'izany dia manana rindrambaiko marobe isika 🙂
Izahay dia hanao. Hiandry ny Paska afaka aho, hehe
Olga dia hoy izy:
Salama maraina aho manomboka amin'ity d elinux sy centos ity dia afaka mangataka aminao tsikelikely aho hoe ahoana no hataoko mba hamoronana ilay DVD hametrahana centos amin'ny personal portable. Misaotra anao
Valiny tamin'i Olga
Raha handoro DVD dia ampiasao izay fampiharana maimaim-poana Alikaola 120% na Nero. Fampiharana maimaim-poana handoro sary CD na DVD dia azo alaina CDBurnerXP avy amin'ny:
Mora dia mora ny menio ary safidio fotsiny ny sary handraisana ary dia izay :).
Raha vantany vao may ny sary CentOS eo amin'ny dvd dia atsangano indray ny solosainao ary ampidiro ny biôs (mazàna ny fanalahidy F2 eo amin'ny efijery voalohany izay miseho rehefa tsindrio ny bokotra herinaratra amin'ny solosaina finday na pc). Raha vao eo amin'ny biôs ianao dia mankanesa any amin'ny kiheba antsoina hoe "boot" ary safidio ny cd / dvd amin'ny toerana voalohany sy ny kapila mafy ataonao amin'ny toerana faharoa. Avy eo dia mitahiry sy manidy biôs ianao ary hamerina ny solosaina finday ary hiala amin'ny dvd.
Aorian'ny fametrahana azy dia avelako horonan-tsary ianao:
Grover dia hoy izy:
Salama, raha te hahalala ny fomba fametrahana CentOS 6.4 amin'ny vmware ianao dia mamporisika anao aho hitsidika an'ity lahatsoratra ity:
Mamaly an'i Grover
Yuri dia hoy izy:
Fandraisana tsara indrindra,
Misaotra anao tamin'ny fitarihana anay distro tena marin-toerana ho an'ny tontolon'ny birao.
Ho tsara fanahy toa anao koa ve ianao hitarika anay tsikelikely amin'ny:
- Fametrahana Equinox Theme sy sary masina Faenza
- Deadbeef 0.5.6 fametrahana (mpilalao tiako indrindra)
- Ovao ho iray toa ny Zorin 6 ny menio lehibe sy bara gnome (toa win7 - http://www.linuxinsider.com/images/article_images/76180_980x613.jpg)
- ary tsy afaka amiko ny mametraka sudo yum -y mametraka gnome-tweak-tool, andro maromaro aho nefa tsy nahomby.
Misaotra anao ary manantena aho fa tsy hanararaotra ny sainao tsara.
Valio i Yuri
Salama ary mamaly haingana dia haingana aho:
Faha-1 - sary famantarana fametrahana Equinox Theme sy Faenza:
Ampidiro ity repo ity: http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el6/i386/nux-dextop-release-0-2.el6.nux.noarch.rpm
raha vao nametraka dia manova ny laharam-pahamehana ka lasa: priorité = 20
Ampidiro izao ny fonosana maotera gtk-equinox avy any amin'ny terminal na miaraka amina fampiharana add / esory :). Napetraka ny lohahevitra Equinox sy sary masina faenza.
Deadbeef fametrahana faha-2:
Ovao ny faha-3 ny karazana menio (Gnomedo):
Sintomy ny kaody loharano avy amin'ny: https://launchpad.net/gnomenu/trunk/2.9.1/+download/gnomenu-2.9.1.tar.gz
Unzip ny fisie ary adika ny fampirimana iray manontolo (izany hoe, gnomenu) mankany amin'ny folder / tmp
Open terminal sy ny karazany:
(ampidiro ny teny miafinao)
Ankehitriny dia manana ny menio eo anelanelan'ny singa azonao ampiana amin'ny tontonana :). Ao amin'ity rohy ity no ahitanao lohahevitra samihafa: http://gnome-look.org/index.php?xsortmode=high&page=0&xcontentmode=189
Fitaovana Gnome-tweak faha-4:
Ity fonosana ity dia tsy misy satria ny CentOS 6 dia mampiasa Gnome 2 fa tsy Gnome 3 miaraka amin'ny akorany izay anaovana gnome-tweak-tool.
jony127 dia hoy izy:
Salama, tsy nanandrana an'ity distro ity aho ary toy ny efa henoko hatrany fa mifantoka bebe kokoa amin'ny fampiasana mpizara izany satria tsy namporisihina hametraka azy amin'ny solosaiko aho.
Te hahafanta-javatra fotsiny, inona izany ireo repo Epel? satria hitako nanondro an'i Fedora ry zareo.
Izy ireo dia rindranasa vao haingana nalefa avy tany amin'ny toeran'ny Fedora mankany RHEL sy CentOS .. Amin'ny ankapobeny dia mitovy amin'ny Debian Backports izy io :).
More Information: https://fedoraproject.org/wiki/EPEL/es
Ary ahoana, inona ny kininina anananao ao amin'ny pikantsary?, Nametraka fotsiny ny CentOS 6.4 aho ary tena hafa mihitsy ny nautilus misy ahy. Salama !.
Salama, jereo ny kinovan'ny nautilus ary ny gnome iray manontolo dia mitovy amin'ny anao 2.28. Ny hany tokana dia ny fampiasana ny lohahevitra kisary Faenza sy ny lohahevitra Gnome antsoina hoe Equinox (samy hita ao amin'ny repo NUX:
Ankoatr'izay dia ampodiko ihany koa ny nautilus feno amin'ny alàlan'ny fanovana -> Properties ary ao amin'ny tabilao Fitondrantena dia ampidiriko ny safidy faharoa sokafy foana amin'ny maody fitaratra .. 🙂
Manana an'io fotoana io aho nandritra ny fotoana kelikely:
Tena tsara 😀
pabloX dia hoy izy:
Tena tsara!!! Azoko atao ve ny milaza amiko hoe inona ny serivisy ilainao hananana mavitrika hitantanana webmin? (ankoatry ny webmin tenany)
Mamaly an'i pabloX
tsara, miaraka amin'ny lohahevitra Nautilus, misy azo atao ve ny manavao azy hananana ireo takelaka 2?
Mpamadika fako dia hoy izy:
petercheco, hitako fa ny russianfedora repo ho an'ny 6bit centos 64 dia somary lany andro raha oharina amin'ilay 32bit: / ary zavatra hafa no ampiana.
Mamaly an'i Garbage_Killer
Eto no anananao:
Ankehitriny, amin'ity repo ity dia skype fotsiny no sintomiko mivantana. Tsy manampy ny repo aho 🙂
misaotra amin'izany fa afaka mamita ireo tranomboky tsy hita aho.
Marihina fa io distro io dia mifanitsy amin'i Debian amin'ny resaka fitoniana (ny kinova "0" foana dia mirindra tsara hitovy amin'ny Ubuntu LTS, fa ny andiany 1, 2 ary ambonimbony kokoa kosa dia manalalaka sisiny ary manamafy ny distro ao amin'ny Debian. tranga), fa farafaharatsiny manana fanboy vitsy noho i Debian mazàna ary amin'ny ankamaroan'ny serivisy fampiantranoana dia tsy sahin'izy ireo ny manova ny kinova kininina izay tonga hatrany am-boalohany (izay ataon'izy ireo amin'ny Debian Stable) ary kely kokoa azonao atao izay azonao atao matetika ataovy amin'ny Fedora | Red Hat Enterprise Linux.
Na i Debian na i CentOS dia distrosan'ny vondrom-piarahamonina izay tsy mifantoka loatra amin'ny filozofia KISS, fa amin'ny fanaovana ny distro ho be mpampiasa indrindra hahafahan'ny mpampiasa azy mampifanaraka azy ireo amin'ny zavatra tiany sy tsy mila manasarotra ny fiainany amin'ny faran'ny be loatra (na dia Tsy maintsy ekeko fa ny console GNU / Linux dia mpinamana kokoa noho ny Windows tenany).
cractoh dia hoy izy:
salama @ petercheco, arahaba soa, niverina tany amin'ny centos 6.4 aho, rehefa avy nandehandeha namaky ny fianakaviana ubuntu, azo antoka fa izay rehetra niafarany, buntu, dia tsy mandeha amin'ny laptop-ko, izany fianakaviana rehetra izany amiko, ubuntu, kubuntu, ary ny lubuntu farany, tsy te hiasa izy ireo, voatery namono foana aho na nanombohana indray, satria nijanona izy io, nivaingana ny efijery, ary tamin'ny farany dia tsy maintsy nesoriko ny tariby herinaratra, nametraka linux mint, saingy tsy afaka nampandeha ny wifi aho, Openuse tsy hametraka, milaza fa tsy afaka mametraka ny tahiry, yast, ary debian. nanome ahy hadisoana aho, narahako ny torolalany centos, mila mpitantana fotsiny aho, misintona ho feno, amin'ny debian manana qbittorrent, centos aho Tsy haiko ny mikaroka azy io, mieritreritra aho fa mijanona mandritra ny fotoana fohy amin'ny centos, te-hanandrana misokatra aho, saingy ho fisaorana indray noho ny fanampiana sy ny arahaba, avy any Kolombia
Mamaly an'i cractoh
Faly aho fa niverina tany CentOS ianao satria tsy diso fanantenana izany: D. Raha ny momba an'i Debian, andramo ny kinova Wheezy vaovao: http://www.debian.org/CD/http-ftp/#stable
Ho an'ny fividianana fonosana qbittorrent ary apetaho ity repo ity:
Avy eo tsotra fotsiny:
mametaka qbittorrent ianao
Te-hisintona ny iso aho, saingy misy sary 2, iza no alaiko? DVD1.iso na DVD2.iso
Ilay DVD1 🙂
Salama, tiako ny Linux noho ny fahaizany miadidy ... eny, raha manana hevitra ianao ary maniry ny hahatanteraka azy ireo, fa raha tsy vitanao, na dia te hanadala j ... mianatra ianao. t dia ny tsy fandriam-pahalemana (lazaiko izany noho ny dikan-tsoratry ny distros) .Fa tokony hanova ny birao centre Kde izy ireo, tsy dia tiako loatra ny horonana amin'izany. gnome 2.8 cre dia efa antitra be. Centos no milamina indrindra izay manome birao fanovana hatreto ho an'ny fabor.
Aza manahy fa ho avy tsy ho ela ny RHEL 7 / CentOS 7 vaovao .. Anelanelan'ny tapaky faharoa amin'ity taona ity na Janoary, Febroary 2014
Midika izany fa mbola misy ny tsy fahampiana; ___;
Etsy ankilany fantatrao ny fomba ahafahako mampihena ny famirapiratana, nitady hanova ny grub aho ary tsy mahita na inona na inona.
Azonao jerena eto fa tena nohazavaina tsara:
64bit rpm no manome ahy olana. Tsy maintsy nametraka an'ireo 32 aho. Fantatrao ve ny antony hitrangan'izany? ary / na ny fomba fanamboarana azy hahafahana mampiasa ireo rindranasa amin'ny 64bits fa tsy 32bits. Misaotra indrindra anao.
azonao antoka fa tsy nametraka os-32 cent ianao? ...
😮 Miala tsiny, nieritreritra aho fa nametraka ilay kinova 64-bit, very hevitra tamin'ny isa kinova (6.4) aho rehefa naka ny iso nilaozanao, izay tena 32-bit.
Eny tokoa, eto ireo isos 64-bit:
Fanontaniana iray, tsy dia manam-pahalalana momba ny rafitra linux aho raha vao nanomboka niasa niaraka tamin'ny ubuntu fa tiako ho fantatra raha mamela ny hametraka kinova 6.3 an'ny CUPS ny rafitra CentOS 1.6.3?
raha mila an'ity kinova kapoaka ity ianao dia afaka manangona azy. Misintona avy amin'ny:
Petercheco, misaotra betsaka anao mamaly,
Efa azoko alaina izany fa hoy izy ireo tamiko fa mety tsy hanaiky azy io ny CentOS satria amin'ny fanomezana kaopy feno yum -y dia mametraka kinova 1.4.2 aho. Tsy azoko antoka izany.
Misaotra anao mialoha aho noho ny fanampianao
Salama insos centos, fa mila mpampiasa mahazatra ho an'ny mpampiasa birao aho, saingy manelingelina ny mpampiasa foana fa tsy mivoaka ny maody sary, efa napetrako daholo ny zava-drehetra fa isaky ny miverina ny masinina dia mivoaka ao amin'ny console tsy maintsy ataoko foana Ampiasao ny startx ary manelingelina ny mpanjifako izany, lazao amiko fa mitranga foana izany, satria tsy miditra amin'ny maody sary fotsiny, izay tokony hataoko
Tsotra be, amboary ity rakitra ity:
[faka @ CentOS ~] # vim / etc / inittab
ary avy eo izay milaza hoe:
id: 3: initdefault:
Ovao ny 3 ho 5
Avy eo [ESC]: wq! ary [ENTER]
avy eo averinao indray ary mavesatra ny maody sary.
chechog1984 dia hoy izy:
Salama, vaovao aho amin'ny LINUX / CENTOS. Vitako ny niasa XRDP hiasa amin'ny birao lavitra, saingy sarotra ny mitady fomba hahatratrarana azy ao amin'ny CENTOS 6.4. Nanomboka izany rehetra izany rehefa te-hametraka mpandinika ekipa aho fa afaka nifandray lavitra fotsiny rehefa nisokatra ny fivoriana iray (satria raha tsy ny ekipa dia nanisy marika an'ity ekipa an-tserasera ity fa nijanona nifandray ...), tsy afaka nifandray na nahita ny efijery fidirana centos mihitsy aho, Azo atao ve ny mampiasa ny mpandinika ekipa hiditra amin'ny efijery fidirana centos? Na rindrambaiko hafa mamela ahy hifandray sy hiditra amin'ny centos amin'ny alàlan'ny WAN? Niezaka ihany koa aho araka ny GDm saingy tsy nahomby. Mila zavatra mitovy amin'ny mpiara-miasa amiko aho satria miasa amina cluster sy proxy HA ho an'i MariaDB, ary satria ireo teboka dia miorina amin'ny toerana ara-batana lavitra miaraka amina Internet voatokana mahaleo tena isaky ny toerana ara-batana. Ka mila mampifandray lavitra / angamba aho raha ilaina ny mamerina ny solo-sainanao, manome fikojakojana sns tsy misy fitsabahan'ny olona amin'ny solosaina lavitra. Miarahaba misaotra
Mamaly an'i chechog1984
Manoro hevitra ny hampiasa Remmina misy ao amin'ny trano fisakafoanana Rosiana Fedora aho.
Azonao sintonina avy amin'ny:
Raha vao apetraka dia apetraho fotsiny ny fonosana Remmina avy ao amin'ny afovoany manampy / esory ireo programa ary dia izay.
Miasa tsara 😀
izzyvp dia hoy izy:
Fitsapana tsara, hijerena raha toa ka miasa ho OS lehibe ataoko izy.
Mamaly an'i izzyvp
Azo antoka fa tsy hanana olana ianao
Rene dia hoy izy:
Salama namana, te-hametraka fanontaniana aminareo aho, satria vaovao amin'ireo raharaha ireo aho, vao haingana aho no nametraka ny Centos 6, hatramin'ny nialako tao Edubuntu, ny olana dia tsy fantatro ny fomba hampahafantarana azy ireo ny kapila mafy azoko. ity hafatra manaraka ity: Fametahana ny lesoka: fametrahana: karazana rakitra tsy fantatra 'type' ntfs ', misaotra ny sainao.
Valiny tamin'i Rene
sokafy ny terminal sy ny karazana:
(ampidiro ny tenimiafinao faka)
hametraka ianao -y fuse fuse-ntfs-3g
Azonao atao izao ny mametraka ny kapila mafy NTFS misy anao:
(Izy io dia ohatra .. fa tsy sdb1 dia tokony apetrakao izay mifanentana amin'ny unitanao .. Azonao atao ny manamarina an'io miaraka amin'ny gparted azo alaina ao amin'ny epel repository ohatra).
Araho ireto dingana ireto raha hametraka ny epo repo:
Sokafy ny terminal ary midira
mametaka gparted ianao
Kibernao dia hoy izy:
Salama, manao fangatahana aho.
Efa nametraka programa "Amber 12" tao amin'ny CentOS 6.4 ve ianao? Malemy simia izy io
Raha fantatrao ny fomba hisaorako anao.
Mamaly an'i Kibernao
Ity repo ity dia mety hanampy anao fa tsy hampiasa ity programa ity mihitsy:
andres daza dia hoy izy:
Thanksssss ... apetrako izy ... tsy maintsy tsoahiko ny iso liveCd na LiveDVD ????? misaotra
Mamaly an'i andres daza
Salama e…. mirary alina .. inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny CentOS-6.4-x86_64-LiveDVD.iso sy ny CentOS-6.4-x86_64-bin-DVD1.iso, ny voalohany milanja 1.8 GB ary ny iray hafa mihoatra ny 4 GB. Te hizaha toetra ity distro ity aho raha hampiasaina any an-trano. Iza amin'ireo iso roa no mety amiko ary ahoana ny amin'ny LiveCD (738 MB) misaotra anao ..
Salama ianao dia tokony hampidina ny livecd izay mamorona izay ilaina. Ampiasao ireo rohy etsy ambany:
jean carlos acevedo gavidia dia hoy izy:
Salama namana avy amin'ny desdelinux Te-hanontany anao aho, azo adika amin'ny teny espaniola ve i centos? Ary raha azonao atao, ny fomba fanaovako azy, ny marina dia mikarokaroka sy mikaroka aho ary tsy hitako izay fomba hampitana izany amin'ny Espaniôla. Azafady mba ampio aho tiako hipetraka satria tsotra sy haingana izy io.
Mamaly an'i jean carlos acevedo gavidia
misokatra terminal sy karazana:
ampidiro ny tenimiafinao root
mametaka fiteny-config-fiteny ianao
Safidio izao ny fiteninao, apetraho ary avereno ny rafitrao your
Salama namana avy amin'ny desdelinux Te-hanontany anao aho, azo adika amin'ny teny espaniola ve i centos? Ary raha azonao atao, ny fomba fanaovako azy, ny marina dia mikarokaroka sy mikaroka aho ary tsy hitako izay fomba hampitana azy amin'ny Espaniôla. Azafady mba ampio aho tiako hipetraka satria tsotra sy haingana ny ...
Fikandrana vondrona miaraka amin'i KWin
Script Bash: kopia sary vaovao avy amin'ny SD mankany PC